Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Lucas Digne Tantara Ankizy Miampy Tambabe Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anaram-bosotra "Luca". Ny tantaranay momba ny fahazazan'i Lucas Digne sy ny zava-misy momba an'i Untold Biography Facts dia mitondra aminao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny fiainany voalohany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainany manokana, ny zava-misy ara-pianakaviana, ny fomba fiainany ary ny zavatra hafa fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaizany manenjika mpanafika amin'ny fananany fananana. Na dia izany aza, vitsy monja no mihevitra ny Biography an'i Lucas Digne izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Havia-miverina Lucas Digne dia teraka tamin'ny andro 20 faha-Jolay Jolay 1993 tao amin'ny kaominina Meaux any Frantsa. Izy dia faharoa amin'ny zanany roa naterak'i Karine Digne sy ny rainy, Philippe Digne.
Lucas Digne dia teraka tamin'ny ray aman-dreny izay tsy dia fantatra firy. Sary: Francefootball.
Nalefa tany Meaux any Frantsa ny zom-pirenen'i frantsay izay anisan'ny vokatry ny karazan'olom-poko fotsy sy ny fakany maloto ary nitaiza ny zokiny - Mathieu Digne.
Lucas Digne dia nobeazina tao amin'ny kaominina Meaux any Frantsa. Sary: Francefootball ary WorldAtlas.
Nihalehibe tany amin'ny tany nahaterahany tany Meaux France i Digne no nanitsakitsaka ny lalan'ny zokiny lahimatoa Mathieu tamin'ny alàlan'ny filalaovany baolina tao anatin'ny vanim-potoana feno volo. Raha teo i Digne dia nilaza tamim-pahanginana izay rehetra mihaino mba ho lasa matihanina amin'ny fanatanjahantena izy ary manana fombafomba tonga lafatra hampandeha ny sainy.
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fanabeazana sy fanabeazana
Rehefa nandroso taona sy taonany ny tanora Digne, ny fahaizany amin'ny baolina kitra dia nanjary lasa raiki-tampisaka. Soa ihany, ny fisoratana anarana ao amin'ny klioba eto an-toerana Mareuil-Sur-Ourcq dia nanome habaka ampy azy mba hiaina baolina mifaninana ary ny tena zava-dehibe, dia nampihomehy ny fomba fijeriny momba ny maha-matihanina azy.
Tamin'ny fotoana niarahan'i Digne dia 9 tao 2002, niaraka tamin'ny klioba mpifanolobodirindrina izy, Crepy-en-Valois izay tsy vitan'ny fanatsarana fotsiny ny fahaizam-pahaizana azony tamin'ny 3 taona niofanana tao Mareuil-Sur-Ourcq fa nijanona nisokatra tamin'ny fianarana fahalalana fototra.
Karatra maha-marika an'i Lucas Digne ao amin'ny Crepy-en-Valois. Sary: Francefootball.
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Nandritra ny faran'ny lalao baolina kitra Digne niaraka tamin'i Crepy-en-Valois, nanjary sarotra ny tsy niraharaha satria ny volon-koditra volom-bolo kosa dia nanjary karazan'andriana iray izay nanao scouts avy amin'i Lille nanohy ny toerana nahazendana azy nandritra ny lalao nifaninana.
Noho izany, ny prodigy baolina kitra 12 taona taona dia nentina tany amin'ny rafitry ny tanora Lille izay niakarany tamin'ny laharana tao anatin'ny 5 taona farany mba hahazoana antoka amin'ny fampiroboroboana ny ekipa voalohany amin'ny klioba. Nanohy nanao sonia ny fifanarahana matihanina voalohany nataony tamin'ny lafiny frantsay tamin'ny Jolay 2010 izy.
Lucas Digne milalao ho an'i Lille amin'ny maha-matihanina azy. Sary: FMS.
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Road To Fame Tantara
Ho an'i Digne, tsy mihoatra ny toerana fiompiana i Lille satria nifantoka tamin'ny fanatanterahana ny nofinofin-janany tamin'ny lalao ho an'ny Paris Saint Germain. Ny fampandrosoana dia manazava ny fifosany haingana ho an'ny "club club nofy" ao 2013 taorian'ny nandany vanim-potoana roa tao Lille.
PSG nanao sonia an'i Lucas Digne avy any Lille ao 2013. Sary: Sportskeeda.
Raha tany amin'ny PSG i Digne dia toa napetraka mba handany fotoana amin'ny dabilio. Tsy afaka nametraka ny tenany tao amin'ny klioba izy raha lasa mpilalao indray izy rehefa tonga ary lasa zatra tsy nisolo toerana ny ankamaroan'ny lalao lehibe nofinofiny. Mba hisarihana izany rehetra izany dia nindramina tany Roma izy tamin'ny vanim-potoana 2015 / 2016 rehefa avy nandany roa taona monja niaraka tamin'ireo Paris.
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Mitsangàna mba haka tantara
Na dia nandany herintaona tao Roma aza i Digne, ny fipoany ho an'ny klioba dia mihoatra ny zavatra noraisiny tao amin'ny PSG tao anatin'ny vanim-potoana roa, ary tsy noheverina ho flop any Barcelona izay nifindraany tany 2016 ary nandany vanim-potoana roa nilalao an-dàlan'ny mpilalao baolina kitra toy ny Lionel Messi.
Haingam-pandeha mandraka ankehitriny, milalao ho an'i Everton FC i Digne rehefa avy nanao sonia ny klioba tao 2018. Tsy misalasala izy fa faly amin'ny lafiny anglisy izay noraketiny ny ankamaroan'ny tanjona tamin'ny asany tamin'ny fotoana nanoratana. Ny ambiny, raha ny nambarany dia tantara.
Lucas Digne dia manana endrika fandrosoana amin'ny tanjona tsara ao Everton. Sary: Thewest.
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana mifandraika amin'ny fiainana
Ny fiakaran'ny Digne amin'ny alàlan'ny Lille dia mijanona ho fotoana fohy ho azy mandritra ny taona maro, indrindra fa ny nihaona tamin'ny sipa - Tiziri Digne nandritra ny vanim-potoana. Ireo olon-tiana izay samy 16 taona tamin'ny fotoan'ny fihaonana voalohany dia nanjary mpivady tsy azo sarahina ary lasa nanambady ny volana desambra 2014.
Lucas Digne sy ny vadiny dia nanomboka ho mamy ao amin'ny tanora. Sary: Instagram.
Tziri dia anisan'ireo zavatra hafa mahaliana sy tia manaitaitra izay miandrandra ny hananganana asa amin'ny asa fanaovan-gazety. Vao haingana izy dia niteraka ny zanak'izy ireo voalohany (zanakalahy) tamin'ny aprily 2019 mba hampiditra ilay fianakaviana ho ao anatin'ny tontolo vaovao iray.
Digne sy Tiziri dia niara-nanao ny zanany voalohany tamin'ny aprily 2019. Sary: Instagram.
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Lavitra avy amin'ireo kodiarana mafy, fanamarihana akaiky ary fanadiovana baolina ho an'ny Toffees, ny fianakaviana dia manan-danja lehibe ho an'i Digne. Izahay dia mandalo anao amin'ny fiainany fianakaviany.
Momba an'i razan'i Lucas Digne: Philippe no rain'i Digne. Niasa tao amin'ny trano fanaovana pirinty tao amin'ny Lizy-Sur-Ourcq tany akaikin'i Meaux izy tamin'ny fahazazan'i Digne ary nilalao ho an'ny ekipa voalohany an'ny klioban'ny havan-jaza ankavia Mareuil-Sur-Ocrcq. Tsy milaza akory izy fa nanao be dia be tamin'ny famolavolana ny fiak'i Digne amin'ny baolina kitra ary nitana ny anjara toerana lehibe izy tamin'ny fampandrosoana.
Momba ny reny Lucas Digne: Karine dia maman'i Digne. Toa ny vadiny sy ny zanany lahy dia lehibe amin'ny baolina kitra izy ary indray mandeha amin'ny naha-sekreteran'ny klioba an'i Digne, Mareuil-Sur-Ocrcq. Ny renim-pianakaviana be fitiavana roa dia mitazona ny zanany lahy indrindra fa i Digne izay nitondra ny zafikeliny farany.
Nitaiza ray aman-dreny izay tsy dia fantatra firy i Lucas Digne. Credits sary: ​​ClipArtStation sy FotballWikia.
Momba ny mpirahalahy Lucas Digne: Digne dia manana rahalahy iray antsoina hoe Mathieu. Ilay zokiny izay mizara tantara mitovy amin'i Digne koa dia nanangana ny asany tao Lille fa tsy lasa matihanina. Na eo aza izany dia tsy mitsahatra ny manohana an'i Digne izy izay vonona ny hanao anarana tsara ho an'ny fianakaviana amin'ny baolina kitra ambony.
Momba ny havan'i Lucas Digne: I Digne dia manana raibe sy renibeny amin'ny razana izay mbola tsy fantatra raha tsy misy firaketana ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, zanak'olo-mpiray tam-po sy zanak'anabaviny. Torak'izay koa, ireo zanak'olo-mpiray tam-poon'ny ankavia an-kavanana dia mbola ho fantatra ny tena izy indrindra amin'ny tranga talohan'ny fahazazany mandra-pahatongan'ny dat.
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Ny fiainan'ny tena manokana
Eny, mijery tsara i Digne fa ny fitsaràn'ny fitsarana, ny toetrany dia misarika ny fon'ny olona rehetra mifanena aminy. Ny toetran'ny persona manintona an'i Digne izay avy amin'ny famantarana zodiakin'ny kansera dia ahitana ny famoizany ho an'ny ambition, ny fampirantiana ny faharanitan-tsaina ary ny fahatoniana tsy voatanisa.
Ny tombotsoany sy ny fialamboliny dia misy ny fitsangatsanganana, ny fihainoana mozika manokana indrindra ny R&B sy Rap. Digne koa dia mitazona lalao tenisy sy basikety ary koa mandany fotoana tsara amin'ny fianakaviana sy ny namany.
Ny fitsidihana dia iray amin'ireo mahaliana an'i Lucas Digne. Sary: Instagram.
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Fiainana momba ny fiainana
Ny vidin'ny tsenan'ny € 30 tapitrisa tamin'ny fotoana nanoratana, niaraka tamin'ny traikefa an'ny baolina kitra matihanina dia nametraka an'i Digne ao amin'ny ligin'ny mpahazo karama ambony ary tombony mahafinaritra.
Miaina fiainana mamirapiratra izy io izay hita hatrany amin'ny fomba fandaniany, trano ary koa trano tsiro hafakely amin'ny trano fonenana rehefa milalao any ivelany ny ligin'ny frantsay. Angamba ny tena mahavariana indrindra dia ny famoriam-bokany amin'ny fiara izay nofehezin'ny marika toa an'i Ferrari, Mercedes ary Audi.
Lucas Digne mitaona eo akaikin'ny iray amin'ireo mpitaingina Audi. Sary: Wtfoot
Tantara momba ny fahazazan-janany Lucas Digne sy ny zava-misy amin'ny Untold Biography Untold Facts
Mitovy ny mampiahiahy sy mahalala. Azafady mba jerena eto ambany eto ny zavatra tsy fantatra na tsy fantatra momba an'i Lucas Digne.
Mifoka sy misotro: Tsy manana tantara miaraka amin'ny sigara i Digne, ary tsy mahazo misotro amin'ny fotoana nanoratana. Te hiezaka hanana fahasalamana tsara izy ary misitraka amin'izay mety ho mametra ny asany.
Tattoos: Manana tombokavatsa malaza eo amin'ny sandriny sy teny tsy mampiady hevitra (Tsy hanara-maso velively aho ') eo amin'ny tratrany izay diso taloha dia ny fitiavany an'i Liverpool. Raha nametaka ny firaketana an-tsoratra izany raharaha izany, nanazava i Digne fa fanomezam-boninahitra ny ray aman-dreniny izany.
Ny tatoavan'i Lucas Digne dia mivaky hoe "Tsy handeha irery aho". Sary: Instagram.
Fanoloran-tena iraisam-pirenena: Ny lalao ankavia ho an'ny ekipam-pirenena any Frantsa ary nisolo tena ireo sokajy rehetra ireo ho an'ny ambaratonga U16 ho U21. Nilalao tany Frantsa izy nandritra ny amboara eran'izao tontolo izao 2014 ary niatrika ny ekipa frantsay tamin'ny 2018 FIFA kaopy tontolo.
fivavahana: Tsy dia fantatra firy momba ny toeran'i Digne momba ny finoana, na izany aza, izy dia manome ny ranomainty ho mpino amin'ny alàlan'ny fiampitana ny tenany amin'ny sehatra filalaovana. Io fomba fanao io dia be mpitia eo amin'ny Kristiana indrindra fa ny Katolika.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namakiana ny tantaranay momba ny fahazazan'i Lucas Digne sy ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
N'Golo Kante ny tantaram-pitiavam-pahazavana momba ny tantaram-pahaterahana navoaka tsy fanta-daza
Daty efa namboarina: 25 may 2020
Ousmane Dembele Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny tantaran'i Aymeric Laporte momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa
Alexandre Lacazette tantaram-pahaterahana momba ny tantaram-pitiavam-bolo mbola tsy fantatra